Minion Rush အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ် 2022 - အခမဲ့ - 9Apps
ဒေါင်းလုပ် XAPK（94.1MB） ယခင်ဗားရှင်း
၏ဖော်ပြချက် Minion Rush: Running Game
illumination, universal and and gameloft သည်သင့်အားနူဒိုပျော့ပျောင်းသူ, မိသားစုနှင့်ရင်းနှီးသောအပြေးသမားဂိမ်းကိုယူဆောင်လာရန် ပူးပေါင်း. Gru နှင့်ဂိုဏ်းများအတွက်လျှို့ဝှက်မစ်ရှင်များ၌လျှို့ဝှက်မစ်ရှင်များနှင့်အတူ Minions များနှင့်အတူ Minions နှင့်အတူပိတ်ထားပါလိမ့်မည်။
သငျသညျရပ်ကွက်အတွင်းမှတဆင့်ပြေး, ဓာတ်ခွဲခန်းထဲမှာ dodge ထောင်ချောက်ကိုကူးယူသို့မဟုတ် SuperChinerain Hoteouts သို့ခုန်ချ, စွန့်စားမှုနှင့်စိန်ခေါ်မှုအသစ်များအမြဲရှိပါတယ်။ သင် El Macho သို့ပြေးသွားမည်, Motargo နှင့်မိန်းကလေးများနှင့်ဂိမ်းကစားခြင်းသို့မဟုတ်အချိန်အားလုံး၏အကြီးမြတ်ဆုံး minion agent ဖြစ်ရန်သင်ယူပါ။
အပြေးပြေးခြင်းသည်အဆုံးမဲ့ဖြစ်သည်။ Minions များသည်ဤမိသားစုနှင့်ရင်းနှီးသောလုပ်ဆောင်မှုဂိမ်းကိုစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းသောမစ်ရှင်များ, အဆင့်များ, ပစ္စည်းများနှင့်အရူးဝတ်စုံများကို0တ်ဆင်သည်။ ထို့အပြင်လတ်ဆတ်သောစွန့်စားမှုများနှင့်အကြောင်းအရာများကိုအဆက်မပြတ်ထည့်သွင်းထားသဖြင့်သင်ဟာစက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ်ကောင်းသောပျော်စရာမလွယ်ကူပါ။
အထူးအစီအစဉ်များကိုဖြည့်စွက်ခြင်းဖြင့်ကွဲပြားခြားနားသောပုံပြင်များနှင့်ဆုများကိုသော့ဖွင့်နိုင်သည် ။ သို့သော်နေရာတစ်ခုစီတွင်သိုလှောင်မှုစွမ်းရည်နှင့် Acrobatical အမျိုးမျိုးကို အသုံးပြု. လျှို့ဝှက်ထားသည့်လျှို့ဝှက် in ရိယာကိုသင်ရှာဖွေရန်လိုသည်။
t minions '' သမိုင်းတစ်လျှောက်မှရိုင်းသောနေရာများတွင်တက်။ ဒါကြောင့်သင်ဟာကမ်းခြေမှာရှိတဲ့ Ten Leade League HQ, RAID vector ရဲ့ Lair ကိုဖြတ်သန်းသွားလိမ့်မယ်, 't ကိုအေးအေးဆေးဆေးပဲ - သူတို့ကမင်းရဲ့အောင်ပွဲအတွက်သင်၏သော့ချက်ဖြစ်သည်။ Banmus Point များ, အပိုမြန်နှုန်း, ခက်ခဲသောမစ်ရှင်ဖြည့်စွက်ရန်အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောကိရိယာတစ်ခု ဤပျော်စရာအခက်အခဲများနှင့်ပါ0င်သောဆန္ဒပြပွဲများနှင့်ပါ0င်သူအားလုံးအတွက်ဆုများနှင့်အတူဤပျော်စရာအခက်အခဲများနှင့်အတူကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိကစားသမားများနှင့်ယှဉ်ပြိုင်သည်။ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ / EN-EN-GB / Privacy-Nothise - အသုံးပြုမှုဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များ - http://www.gameloft.com/en-GB/conditions- ယူရန် - Uner-user license .com / en-gb / Eula
Very Good 😊 I like the game 😍👍
Ko Chay Ko
ပေးထားတဲ့ စေတနာတွေ ပြန်မရရင် နေပါစေ အလေးမထားတဲ့ ဝေဒနါတော့ မခံစားရလိုပါ၏ အရှင်ဘုရား
T M S YBS